भलिबलमा भविष्य खोज्दै कञ्चनपुरका भण्डारी « Sajilokhabar
(Wednesday 24th February 2021)
भलिबलमा भविष्य खोज्दै कञ्चनपुरका भण्डारी
काठमाडौँ, १० फागुन । भलिबलका क्षेत्रीय खेलाडी विशाल भण्डारी १७ वर्षको मात्र भए । कम उमेरमा क्षेत्रीय स्तरमा पुगेका उनी सुदूरपश्चिमका कान्छा खेलाडी बन्ने सौभाग्य समेत प्राप्त गरेका छन् ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं ६ का उहाँ अहिले जुनसुकै भलिबल प्रतियोगितामा सबैभन्दा कान्छा खेलाडीका रुपमा देखिन थालेका छन् । एघार वर्षकै उमेरबाट भलिबल खेलप्रति आकर्षित भएका उनी लाटाभूमुराज युवा क्लबबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
कञ्चनपुरको आदर्श विद्या निकेतनमा कक्षा १२ मा अध्ययरत उनी खेलसँगै अध्ययनलाई पनि सँगै निरन्तरता दिनुपर्दा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । “मेरो घरबाट मलाई खेलकूदमा पूर्ण छुट छ । त्यही विश्वासले म सानै उमेरमा यहाँसम्म पुगेको हुँ”, उनले भने, “जति बाहिरबाट देख्दा सजिलो लाग्छ । त्यति मैदानमा पुगे सजिलो छैन । तर ममा विश्वास छ म राम्रो खेलाडी भएर देखाउन सक्छु ।”
उनी अहिलेसम्म सहभागी भएका प्रतियोगितामा पनि सबैभन्दा कम उमेरको आफू नै हुने गरेको र भलिबल खेललाई व्यावसायिकरुपमा अगाडि बढाउने धोको रहेको बताउँछन् । उनले सहभागी भएको खेलमा उदयमान खेलाडीको उपाधिसमेत पाउँदै आएका छन् । “महेन्द्रनगर कभर्ड हलमा दुई वर्षदेखि मैले भलिबल सिक्दै आएको छु । गुरुबाट सिकेको सीपलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने मेरो लक्ष्य छ”, उनी थप्छन्, “खेलकूदमा भविष्य छैन भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन । आफ्नो कर्ममा निरन्तरता दिनसके व्यावसायिक खेलाडी बन्न सकिन्छ । म बनेर देखाउने छु ।”
उनी खेलाडीकै रुपमा स्थापित भएका कारण विद्यालयले पनि ११ र १२ मा शुल्क लिएको छैन । अहिले अन्तिममा केही शिक्षकले शुल्क माग्दा आफूलाई अध्ययनमा बाधा पुगेको उनले बताए ।
“परिवारमा कमाउने कोही छैन । बुवाले भारतमा काम गरी पठाएको पैसाले घर खर्च र अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने, “माध्यामिक शिक्षा परीक्षा पास हुँदा विद्यालयले निःशुल्क अध्ययन गराउने जनाउँदै मेरो भर्ना गराएको थियो । अहिले शुल्क माग्न थालेको छ । यही अवस्थामा अध्ययन कतै बिथोलिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।” उनले महेन्द्रनगर कभर्डहलमा भलिबल खेलका प्रशिक्षक जगदीश भट्ट र लालबहादुर बटालाबाट प्रशिक्षित हुँदै आएका छन् । कोरोना महामारीको सङ्क्रमणका कारण राष्ट्रिय खेलाडी टिममा जाने आफ्नो सपना अधुरो भएको उनले बताए ।
“कोरोनाका कारण हाम्रो प्रशिक्षण रोकियो । मेरो राष्ट्रिय खेलमा खेल्ने निधो भएको थियो”, उनले भने, “त्यो सपना कोरोनाका कारण पूरा हुन सकेन ।” उचाइ कम भएका कारण उनले लिब्रो खेल्दै आएका छन् ।
भलिबलका राष्ट्रिय प्रशिक्षक जगदीश भट्टले विशाल पछिल्लो पुस्ताको उदाउँदो खेलाडी भएको बताए । “खेलाडीमा हुनुपर्ने सबै गुण विशालमा छ । उनमा राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म पुग्ने गुण छन्”, उनले भने, “सानैमा खेलमा लागेकाले पनि त्यस्तो सम्भावना देखिएको हुनसक्छ । यस्तो गुण खेलाडीमा प्रायः कमैमा हुन्छ ।” उनले जुनसुकै खेलमा पनि सुदूरपश्चिमको खेलाडी उत्कृष्ट रहेको बताउँदै खेलाडीका लागि चाहिने वातावरण सुदूरपश्चिममा कुनै निकायबाट हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले पैसा खर्च गरेर मात्र खेलाडी स्थापित हुन नसक्ने र खेलाडीका लागि खेलमैत्री वातावरणको खाँचो रहेको औल्याए ।
खेलकूदले युवालाई सही बाटोमा डोर्याउन सकिने जनाउँदै भलिबलका राष्ट्रिय प्रशिक्षक भट्टले सुदूरपश्चिमलाई चिनाउने एकै माध्यम खेलकूद बन्नसक्ने बताए । “हामी अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छौं भने त्यो खेलकुदमा छौँ । खेलकूदले प्रदेशलाई चिनाउन समय लाग्ने छैन”, उनले भने, “प्रदेशको खेलकूदमा लगानी शुन्य देखिएको छ र स्थानीय तहले पनि अन्य खेलकूद विधा जस्तै भलिबललाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्दछ ।”
ताप्लेजुङका स्थानीय वन तथा जैविकता संरक्षणमा सक्रिय बन्दै
ताप्लेजुङ, १२ फागुन । ताप्लेजुङमा वन तथा जैविकता संरक्षणमा स्थानीयहरु सक्रिय बन्दै गएका छन् ।
नेपालमा ९४ जनामा कोरोना संक्रमण, ७१ जना डिस्चार्ज
काठमाडौँ, १२ फागुन । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ७३ हजार ७६० जना पुगेको
ताप्लेजुङमा अलैँची उत्पादन बढ्दोः बजार मूल्य घट्दो
ताप्लेजुङ, १२ फागुन । ताप्लेजुङमा अलैँची उत्पादन वृद्धि भएसँगै बजार मूल्य घट्दै गएकाले कृषकले राम्रो
डा. केसीको २०औँ सत्याग्रह स्थगित
काठमाडौँ, १२ फागुन । डा. गोविन्द केसीले २०औँ सत्याग्रह स्थगित गरेका छन् । बुधबार माइतीघरमा